Indlu encinci "EggLady" - I-Airbnb
Indlu encinci "EggLady"
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMateja
Embindini wezidiliya ezinombono omangalisayo kukho izindlu ezincinci ezilungelelaniswe njengendawo yokumisa inkampu. Izindlu ezincinci zinikezelwe kubafazi base-Istrian ababizwa ngokuba yi-Savrinke kwaye baxhotyiswe ngefenitshala yokuqala yenkulungwane edlulileyo. Kwindlu nganye encinci uya kukwazi malunga ne-Istria, imbali yayo kunye nelifa lenkcubeko.
Ukongeza, sikwabonelela ngesidlo sakusasa sase-Istrian esilungiselelwe kuphela ngeemveliso zalapha ekhaya kwaye ufumana amava ama-5 asekhaya okufumana abantu basekhaya kunye namabali abo!
Ezi zindlu zimi kumbindi wentsimi yediliya kwaye zinika umbono omangalisayo phezu kweKoper/Trieste Bay. Izindlu ziyilwe ngendlela yezakhiwo eziqhelekileyo ze-Istria kunye nezinto ezichazayo njengophahla okanye umbala we-façade ... Ingaphakathi lezindlu lihlotshiswe nge-19th Century eyinyani / ekuqaleni kwe-20.
Ifenitshala yenkulungwane. Ingaphakathi kwindlu nganye yezindlu ikwatyhila imbali ye-Istria yaseSlovenia kunye namabali abasetyhini base-Šavrinke basekhaya. I-Šavrinke yayingoomakhulu bethu ababethengisa kwaye bathubelezisa iimveliso zasekhaya kwimarike enkulu yaseTrieste.
Kuyimbeko kookhokho ababhinqileyo balo mmandla ukuba abafazi be-Istrian abanebhongo babesazi ukuba badlule njani kwizilingo kunye neembandezelo eza ngendlela yabo.
Sibekwe kwinduli encinci enembono entle ... ungatya kwindawo yethu okanye uye kwindawo yokutyela ebekwe kumgama oziikhilomitha ezingama-2,5 ukusuka kuthi kwaye apho unokufumana kwakhona iposti kunye nevenkile yelali.
Kwindawo yethu uya kufumana lonke ulwazi lwabakhenkethi, iincwadana kunye neemephu ze-turistic...kwaye ngokuqinisekileyo zonke iingcebiso PHIPHO uye phi & YINTONI onokuyibona!
Iilwimi: English, Italiano, Polski